Maxaa Kala Heysta Habeen Danbe Kooxaha Juventus Iyo Inter Milan Oo Geesaha Isku Geli Doona Turin. - jornalizem
Maxaa Kala Heysta Habeen Danbe Kooxaha Juventus Iyo Inter Milan Oo Geesaha Isku Geli Doona Turin.
Juventus ayaa ka dhigi karta kulamada aan dhinacooda dhulka la dhigin Serie A 50 kulan marka ay la ciyaarayaan Inter Milan kuwaasoo iyagana aan awoodi karin in laga badiyo inkastoo horyaalka bilow yahay, haddii ay doonayaan inay Juve kula tartamaan horyaalka.
Juventus ayaa 28 dhibcood ka heshay 10 kulan oo ay ciyaareen Serie A xilli ciyaareedkan, laakiin Inter ayaa kaalinta labaad ku jirta iyagoo afar dhibcood ka danbeeya Juve, waxaana ay badiyeen sagaalkii kulan ee ugu danbeysay ee tartamada oo dhan. Taasoo ciyaarta sabtida ka dhigeysa mid aad u culus una adag.
“Waxaan halkaas aadeynaa anagoo koox sarre ah, waxaana ciyaari doonaan ciyaarteena” ayuu yiri daafaca halyeeyga ah Javier Zanetti. “Waan ka warqabnaa inaan la ciyaareyno koox weyn, aan rajeyno inay noqoto ciyaar fiican oo lagu riyaaqo.”
Kalsoonida Inter ayaa sii koradhay ka dib markii ay ka soo kabsadeen gool looga hormaray kulanki Sampdoria. Inter ayaa 1-0 lagu hogaaminayay qeybtii hore, waxaana ay dhaliyeen seddex gool qeybtii labaad ka dib markii Andrea Costa casaan laga siiyay Sampdoria, iyadoo ciyaarta ku dhameystay guul 3-2 ah.
“Soo laabashadeenii ciyaarta waxa ay aheyd astaan weyn. Waxaa la inagala dhaliyay gool taasoo dhici karta, laakiin waxaan laheyn awood aan kaga jawaabno waxaana isticmaalnay tayadeena” ayuu yiri Zanetti.
Kulankaan waa kulankii ugu horeysay ee Stramaccioni uu ka hortagayo Juventus. Ninkii uu shaqadan ka bedelay Claudio Ranieri ayaa la ceyriyay bishii March labo maalmood ka dib markii guuldarro 2-0 ay ka soo gaartay Juventus.
“Marka ay timaado kulanka aan Juve la ciyaareyno sabtida, nasiib ayaan leeyahay sababtoo ah kama warqabo muhiimada ay leedahay kulankaan, waana deganahay.” ayuu yiri Stramaccioni.
“Laakiin waxaan aaminsanahay hadii aad la ciyaareyso kooxda ugu sareysa horyaalka iyo kooxda ugu hooseysa, in Inter ay mar walba isku daydo inay badiso. Faa’idada kaliya ee Juve ay na dheer tahay ayaa ah in ciyaartoydooda ay in muddo ah isla ciyaarayeen oo ay isla qabsadeen.”
Juventus ayaa iyaga laftooda soo bandhigaya awood soo kabsasho ah habeenkii arbacada, ka dib markii Paul Pogba uu goolka guusha u dhaliyay ilbiriqsiyadii u danbeysay ciyaartii ay 2-1 kaga badiyeen Bologna.
“Kulanka sabtida ee aan la leenahay Inter waxa ay noqon doontaa ciyaar weyn” ayuu yiri Fabio Quagliarella, kaasoo dhaliyay goolkii furitaanka ee Juventus kulankii Bologna.
“Laakiin ma aqaano inaan ciyaari doono madaama tababaraha uu jecel yahay inuu isku bedbedelo gooldhaliyayaasha.
“Waxaan soo bandhignay mar kale dabeecadeena ah quusasho la’aanta. Waxaan aaminsanahay inaan guul gaari karno ilaa daqiiqada 95aad.”
Juventus ayaa horyaalka ku qaaday xilli ciyaareedkii hore iyadoo aan kulana laga badin, markii ugu danbeysay ee guuldarro Serie A ka soo gaarto waxa ay ka soo gaartay Parma xilli ciyaareedkii 2010-11.
Rikoorka ugu badan ee kulamada isku xiga ee aan koox laga badinin Serie A waxaa heysa AC Milan oo dhigtay bilowgii 90meeyadii